Herbal mitrandraka, Animal mitrandraka, Sweeteners, Plant hanesorana solika - Tong Rui Bio-Tech
ny zavatra atolotra
Mifantoha Ary Professional, ho tsara kokoa ny fiainana!
Nanjing Tong Rui Bio-Tech Co., Ltd. antsoina hoe TRB, dia nifantoka tamin'ny fitrandrahana voajanahary nandritra ny 18 taona, TRB dia orinasa miorina amin'ny teknolojia izay manambatra ny varotra R&D, ny famokarana ary ny varotra iraisam-pirenena. Ny vokatra TRB dia misy ireo fitrandrahana zavamaniry, fitrandrahana biby, zava-mamy, nootropika, ranom-boankazo sy vovoka legioma, menaka manitra ary famenon-tsakafo. TRB amin'izao fotoana izao dia manana orinasa roa, ny iray dia voajanahary voajanahary fitrandrahana orinasa, ny iray kosa orinasa tantely vokatra, ary manana andiana mari-pankasitrahana toy ny ISO9001, ISO22000, HACCP, ORGANICAL, FDA, HALAL, KOSHER.
Green Tea hanesorana
Gotu Kola hanesorana
Sisin-tanin'i siansa sy ny teknolojia
Mandrakariva isika amin'ny lohalaharana ny siansa sy ny teknolojia, handray anjara mavitrika amin'ny fianarana ambony an-toerana sy iraisam-pirenena sy ny orinasa teknolojia fihaonambe fifanakalozana, ary mamolavola ny fitsipika manan-danja ara-boajanahary nalaina. Efa lasa anti-oxidation, aphrodisiac sakafo, sweeteners sy nootropics. Ny vokatra dia mafana-nivarotra sy ny siansa sy ny teknolojia sisintany ao an-tsena.
Top R & D fahaizany
Efa nanangona ny ambony R & D ekipa sy ny fitaovana ao Shina. Mandritra izany fotoana izany, dia efa nahazo fakan-kevitra sy ny asa ara-teknika avy amin'ny mifanaraka Eoropa sy andrim-panjakana Amerikana. Manana ny tsy miankina ny laboratoara, mandroso sakafo ho an'ny mpanao mahomby mifandray voajanahary koa omen'ny ara-boajanahary, ary nanjary fikarohana lalina Series ny Sampanteny sy monomers.
18 taona ny fanondranana traikefa, mihoatra ny 200 andian-dahatsoratra vokatra, an'arivony fitaterana iraisam-pirenena fanao, mihoatra ny 40 firenena traikefa ara-barotra, mifanaraka tsara amin'ny fitsipika pirenena, fanomezana mpanjifa amin'ny fototry ny vokatra sy ny mafana ny vokatra. Mandritra izany fotoana izany, hitantsika izay ilain'ny hafa ara-barotra vokatra ny mpanjifa sy manome vahaolana iray-mijanona ho an'ny Shinoa vokatra ara-pahasalamana.
Ny valan'aretina dia nanana impac malalaka ...
Tags mifandraika: fahasalaman'ny kardia, chro ...
Hazo, ny zavaboary mahazatra indrindra manodidina anao ...
Vao tsy ela akory izay, ny tatitra momba ny angona farany navoaka ...